1 Samoela 23 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 23
Davida tany Keilà, tany an'efitra Zefa sy Maona.
1Ary nisy olona tonga nilaza tamin'i Davida hoe: Indreo ny Filistina mamely an'i Keilà, sady mamabo eny am-pamoloana. 2Dia nanontany an'ny Tompo Davida nanao hoe: Handeha hamely izao Filistina izao va aho? Ary hoy ny navalin'ny Tompo an'i Davida: Mandehana fa handresy ny Filistina hianao sy hanafaka an'i Keilà. 3Hoy anefa ny olon'i Davida taminy: Indro fa aty Jodà aza isika ity matahotra, ka mainka izany hoe ho any Keilà hiady amin'ny miaramilan'ny Filistina! 4Dia nanontany an'ny Tompo indray Davida, ka hoy Iaveh namaly azy: Mitsangàna hianao, midìna any Keilà, fa hatolotro eo an-tànanao ny Filistina. 5Dia nandeha Davida nankany Keilà niaraka tamin'ny olona momba azy, ka niady tamin'ny Filistina. Nahorony ny biby fiompiny, ary nandresy azy mafy dia mafy izy. Izany no namonjeny ny mponina tao Keilà.
6Fony Abiatara zanak'i Akimeleka nandositra tany amin'i Davida any Keilà dia nidina izy nitondra ny efoda eo an-tànany.
7Nisy nilaza tamin'i Saola fa hoe nankany Keilà Davida, ka hoy Saola hoe: Natolotr'Andriamanitra eo an-tànako izy, fa nanao izay mahatafahidy azy izy nankany amin'ny tanàna misy vavahady sy hidiny. 8Ka nantsoin'i Saola ny olona rehetra hiantafika hidina any Keilà sy hanao fahirano an'i Davida sy ny olony. 9Fa rahefa fantratr'i Davida kosa fa niomana hanisy ratsy azy Saola, dia hoy izy tamin'i Abiatara mpisorona: Ento aty ny efoda. 10Dia hoy Davida: Ry Iaveh Andriamanitr'Israely ô, nandre ny mpanomponao fa mioman-ko avy aty Keilà Saola mba handrava ny tanàna noho ny amiko. 11Ka moa hatolotry ny mponina eto Keilà eo an-tànany va aho? Ary moa hidina va Saola araka ny ren'ny mpanomponao? Ho sitrakao anie ny hanambara izany amin'ny mpanomponao, ry Iaveh Andriamanitr'Israely! Dia hoy Iaveh namaly: Hidina izy. 12Ary hoy Davida: Moa hatolotry ny mponina eto Keilà eo an-tànan'i Saola va aho sy ny oloko? Ka hoy Iaveh: Hatolony azy hianao.
13Dia niainga Davida sy ny olony, sahabo ho enin-jato lahy, ka niala tao Keilà, ka dia nandeha nankatsy nankary nanao anjoanjo tany. Nony ren'i Saola fa hoe nandositra niala tao Keilà Davida dia niato tsy nandeha izy. 14Nonina tany an'efitra Davida tao amin'ny fitoerana mimanda, dia nitoetra tao amin'ny tendrombohitra amin'ny efitr'i Zifa. Nitady azy isan'andro Saola, fa tsy natolotr'Andriamanitra teo an-tànany izy.
15Fantatr'i Davida fa niainga niantafika hanala ny ainy Saola ary Davida nitoetra tao amin'ny efitr'i Zifa, any anaty ala. 16Dia niainga nankany amin'i Davida tany an'ala Jonatasy zanak'i Saola. Nankahery ny tànany ao amin'Andriamanitra izy ka nanao taminy hoe: 17Aza matahotra fa ny tànan'i Saola raiko tsy hahazo anao. Hianao hanjaka amin'Israely, ary izaho no ho lefitrao manaraka anao, fantatr'i Saola raiko tsara izany. 18Dia nanao fanekem-pihavanana teo anatrehan'ny Tompo izy roa lahy; ka Davida nijanona tany an'ala ary Jonatasy niverina nody any aminy.
19Ary niakatra nankany amin'i Saola tany Gabaà, ny Zifiana, ka nilaza hoe: Miery any aminay Davida ao amin'ny fitoerana mimanda any an'ala, amin'ny havoan'i Hakila, atsimon'ny tany lava volo. 20Koa araka ny fanirian'ny fanahinao rehetra dia midìna, ry mpanjaka, fa anay ny manolotra azy eo an-tànan'ny mpanjaka. 21Dia hoy Saola: Hotahin'ny Tompo anie hianareo noho izao famindram-ponareo amiko izao. 22Ary miangavy anareo aho, mandehana tilio tsara indray aloha, fantaro ka zahao avokoa ny toerana alehany sy ny olona nahita azy tao, fa konjolahy anie izy izay, hono! 23Ka zahao sy fantaro avokoa ny toerana rehetra fiereny, dia miverena aty amiko mitondra fanoroana izany mazava, dia handeha miaraka aminareo aho. Fa raha eto amin'ny tany koa iny dia hokarohiko amin'ny arivon'i Jodà rehetra. 24Koa dia niainga ireo nankany Zifa hialoha an'i Saola. Fa Davida sy ny olony izany efa nankany amin'ny efitr'i Maona, amin'ny tany lemaka, atsimon'ny tany lava volo.
25Ary niainga Saola sy ny olony hikaroka. Nony nandre izany Davida dia nidina tao amin'ny haram-bato, ka nitoetra teo an'efitr'i Maona Davida. 26Saola moa nandeha tamin'ilan'ny tendrombohitra iray, Davida sy ny olony koa tamin'ny ilan'ny tendrombohitra iray. Niezaka Davida mba tsy ho tratran'i Saola, ka Saola sy ny olony kosa nanodidina an'i Davida sy ny olony hisambotra azy ireo. 27Dia inty nisy iraka anankiray tonga nanatona an'i Saola nanao hoe: Avie faingana hianao fa mananika ny tany ny Filistina! ka natsahatr'i Saola ny fanenjehana an'i Davida, ka lasa hifanena amin'ny Filistina izy. Izany no nanaovana io toerana io hoe Sela-Hamakelkoty. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0351 seconds